Akụkọ - ebumnuche ebumnuche iji bulie ahịa ụgbọ ala iji belata mmetụta COVID-19-na ahịa ụgbọ ala mpaghara.
mepụtara ihe mkpali iji bulie ahịa ụgbọ ala iji belata mmetụta COVID-19′ na ahịa ụgbọ ala mpaghara.
Shanghai (Gasgoo) - Yiwu, nke amata dị ka obere obere ngwa ahịa nke ụwa, ebidola mkpali iji bulie ahịa ụgbọ ala iji wee gbochie mmetụta COVID-19 na ahịa ụgbọ ala mpaghara.
Ka ụgbọ ala dị oke ọnụ karịa, ọnụ ahịa ka onye na-azụ ahịa ga-enweta. Ndị na-azụ ụgbọ ala dị ọnụ ala karịa RMB10,000 (gụnyere VAT) ga-enye nkwado nke RMB3,000 maka ụgbọ ala. Onyinye enyemaka nke RMB5,000 metụtara ụgbọ ala efu na RMB100,000 ma obu n'etiti RMB100,000 na 300,000. Ọzọkwa, ihe agbakwụnye aka ga-abụ okpukpu abụọ na RMB10,000 maka ngwaahịa ndị ọnụahịa ha nọ na RMB300,000 ma ọ bụ n'etiti RMB300,000 na 500,000, na RMB20,000 maka ndị ọnụahịa ha ma ọ bụ karịa RMB500,000.
Gọọmentị ga-ewepụta ndepụta ọcha nke ụlọ ọrụ na-ere ụgbọ ala mpaghara. Oge nkwado maka amụma ahụ ga-adịgide site na wepụta ndepụta ọcha gaa na June 30, 2020.
Ndị ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-azụta ụgbọala ọhụrụ n'aka ndị na-ere ha na aha ndị ọcha ahụ edepụtara n'elu ma na-akwụ ụtụ ụgbọ ala ịzụta na Yiwu nwere ike ịnye ego enyemaka mgbe ndị isi dị mkpa nabatara akwụkwọ ha.
Ewezuga data mmebi, gọọmentị na-ewepụkwa ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala ndị metụtara ọdachi ahụ. A ga-ewepụta ngwa ngwa nke mpaghara 10,000 na mbido iji mee ka ndị na-azụ ahịa zụta ụgbọala ozugbo enwere ike.
China na-ere ahịa afọ 4.4% kwa afọ na 2.07 nde nkeji na Eprel, mana ahịa PV ka belatara 2.6%, dị ka Associationlọ Ọrụ China nke Ndị Na-arụpụta Autgbọala (CAAM) si kwuo. O nwere ike ịpụta na ọ dị mkpa ka a tọpụkwuo mkpa ụgbọ oloko nke onwe.
Iji megharịa ahịa akpaaka nke coronavirus gbasiri ike, ọtụtụ obodo dị na China ewepụla ọtụtụ usoro, nke inye onyinye bụ ihe kachasị anabata. Yiwu abughi onye mbu, o ghaghi ibu nke ikpeazu.
Post oge: Jun-02-2020